Aqalka Sare: Ma ogolaan karno in Kenya ay burburiso hantida Shirkadaha Soomaaliyeed – Kalfadhi
MUQDISHO, 22 JAN 2019 (KALFADHI) Iyadoo Ciidamada Militeriga Kenya ee ku sugan Soomaaliya ay dhawaan duqeyn ku bur buriyeen laba Xaramuud oo ay Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ku laheyd Gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya, ayaa arintaasi waxaa si kulul uga hadlay Guddiga Arimaha Bulshada iyo Warfaafinta ee Aqalka Sare.
Senator Axmed Macalim Cumar (Axmed Nadiir ) oo ah Guddoomiyaha Guddiga Arimaha Bulshada iyo Warfaafinta ee Baarlamaanka Aqalka Sare oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay arinta ka dhacay Jubada Hoose ayna u dulqaadan karin dhibaataynta hantida Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Senatorka ayaa sheegay in arintaasi ay dhawaan ka soo saari doonaan warbixin dhab ah oo ay kaga hadlayaan bur burinta xarumo badan oo ku yaala Soomaaliya oo ay laheyd Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud.
“Uma dulqaadan karno waxa ay Kenya ka geysanayso Jubbooyinka, Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan Guddiga iyo waliba codka Aqalka Sare, waxaan aad u camaareynaynaa falalka foosha xun oo ay geysanayaan Ciidamada Kenya”, ayuu yiri Senator Axmed Nadiir oo katirsan Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Nadiir ayaa sheegay in arintaan uu kala hadli doono cidda ay quseyso sidii loo badbaadin lahaa hantida Soomaaliyeed, ” Waxaan ku dadaaleynaa inaa arintaan kala fariisano cid kasta oo wax ka gasho, looma dulqaadan karo in macno darro loo curyaamiyo ganacsiga Soomaaliyeed”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Senator Axmed Nadiir.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay iney Ciidamada Kenya bur buriyeen Xaruntoodii ku tiilay degaan katirsan Jubada Hoose. “Ciidamada Milateriga Kenya ayaa xalay burburiyay xarun aan ku lahayn deegaanka Dhuyac garoon oo ka tirsan Gobolka Jubbada hoose ee koonfurta Soomaliya”, ayaa lagu qoray page-ka Shirkadda Hormuud.
“Waa maarkii labaad ciidamada kenya ay burburin u gaystaan xarumaha isgaarsiinta aan ku leenahy Jubbada hoose ,15-kii bishan ayey aheyd markii ay sidan oo kale u burburiyeen xarunta Cali Bulay ee isla gobolkaas, waa xaruntii 8aad oo ay burburiyaan ciidamada kenya”, ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Shirkadda Hormuud.
Senator Axmed Macalim Cumar ayaa sheegay Kalfadhi u sheegay in dhawaan ay fadhi deg deg ah arintaan ka yeelan doonaan Guddiga Arimaha Bulshada ee Baarlamaanka Aqalka Sare islamarkaana laga soo saari doono qeyla dhaan si loola xisaabtamo Ciidamada Howlgalka AMISOM ee ka socda dalka Kenya.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Milateriga Kenya oo ay kaga hadlayaan eedeymaha loo jeediyay. Milateriga Kenya ayaa hore loogu eedeeyay iney duqeyn ku burburiyeen Xarumo Shirkadda Hormuud ay ku laheyd degaano iyo degmooyin ku yaala gobolada Gedo iyo Jubada Hoose. Sidoo kale ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Jubbaland oo ay arintaan uga hadalayaan maadaama Jubbooyinka ay hoos yimaadaan Maamulka Jubbaland ee Koonfurta Soomaaliya.